Shiinaha ABS wax taaj oo kale duritaanka wax soo saarka iyo qeybiye | Meesha
Cusbi caaga for wax taaj oo kale duray
Dareeraha ABS (acrylonitrile butadiene styrene) waa polymerka ugu badan ee la isticmaalo, iyo wax ka sameynta duro ABS-ka ayaa ugu caansan.
Mestech waxay khibrad balaaran u leedahay waxka qabadka ABS-ka. Adeegga wax taaj oo kale ee cirbadeynta ABS wuxuu abuuraa qaybo loo isticmaalo warshado kala duwan iyo barnaamijyo kaladuwan oo kaladuwan Qalabkeena casriga ahi si dhakhso leh ayuu shaqadaada u bilaabi doonaa min bilow ilaa dhamaad isagoo leh natiijooyin tayo leh. Caaga ABS caaga ah (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) waa polymerka ugu isticmaalka badan. ABS waxay caan ku tahay astaamaheeda wanaagsan ee xasiloonida cabbirka, dhalaalka, qaabaynta iyo daaweynta dusha sare Qaabaynta cirbadeynta ayaa ah howsha ugu weyn ee abuurka ABS.Waxyaabaha Jirka ah ee cusbada ABS: Heerkulka ugu sarreeya: 176 ° F 80 ° C Heerkulka Ugu Yar: -4 ° F -20 ° C Autoclave Awood Leh: Meel Ma dhalaali Karto: 221 ° F 105 ° C Xoog Fudud: 4,300psi Adag: R110 UV Adkaysi: Midab Liidata: Cuf cufnaan gaar ah : 1.04 Faa'iidooyinka wax taaj oo kale ee duro ee ABS1.Waxyaabaha wanaagsan ee korantada leh 2.Ictact resistance 3.Emic resistance, over especially in many acids, glycerine, alkalis, hydrocarbons and alkohol, cusbada aan dabiici ahayn 4.Wuxuu isku daraa xoog, adkaansho iyo adkeyn hal shay 5.Xayeysiinta culeyska wanaagsan. Miisaan Khafiif ah 7.Xakamaynta xasiloonida cabbiridda iyo dhalaalka dusha sare ayaa wanaagsan, fudud in la rinjiyeeyo, midabaynta, sidoo kale waa lagu buufin karaa biraha, koronto-gelinta, alxamida iyo isku xidhka iyo waxqabadka kale ee waxqabadka. 8. ABS waxaa laga samayn karaa midabbo kala duwan sida loogu baahan yahay. Haddii lagu daro waxyaabaha kuleylka ah ee ololka ama anti-ultraviolet lagu daro ABS, waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro qaybaha aaladaha banaanka ama jawiga heerkulka sareeya.
Codsiga cusbi ABS caag ahABS waxay ku leedahay raadkeeda dalabyo badan oo kala duwan sababtoo ah waxqabadkeeda wanaagsan ee dhameystiran iyo awooda habsami u socodka. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa sida soo socota: 1. Warshadaha Gawaarida Qeybo badan oo ka mid ah warshadaha baabuurta waxaa laga sameeyaa aaladda ABS ama ABS. Tusaale ahaan: muraayada baabuurta, gudiga banaanka jirka, gudiga qurxinta gudaha, isteerinka, gudiga daboolka dhawaqa, qufulka albaabka, bumperka, tuubada hawo bixinta iyo waxyaabo kale oo badan oo ABS ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa qurxinta gudaha gaariga, sida sanduuqa galoofyada iyo sanduuqa sanduuqa cadcad oo ka samaysan ABS kuleylka u adkaysta, qalabka albaabbada sare iyo hoose ee albaabbada, maaskaro haanta biyaha oo laga sameeyay ABS, iyo qaybo kale oo badan oo ka samaysan ABS alaab ceeriin ah. Qiyaasta qaybaha ABS ee gaariga lagu isticmaalo waa qiyaastii 10 kg. Gawaarida kale, xaddiga qaybaha ABS ee la isticmaalay sidoo kale waa wax lala yaabo. Qaybaha ugu muhiimsan ee gaariga waxaa laga sameeyaa ABS, sida dashboardka PC / ABS uu yahay qalfoofka, dushana waxaa laga sameeyay filimka PVC / ABS / BOVC. 2. Qalabka Elektaroniga iyo Korantada ABS way fududahay in lagu duro qolofka iyo qaybaha saxda ah ee leh qaab isku dhafan, cabir xasiloon iyo muuqaal qurux badan. Sidaa darteed, ABS waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka guryaha iyo kuwa yaryar, sida qalabka TV-ga, rikoodhada, qaboojiyaha, qaboojiyaha, makiinadaha dharka lagu dhaqo, qaboojiyeyaasha, qalabka faakiyuumka, mashiinnada fakiska guriga, maqalka iyo VCD. ABS sidoo kale waxaa si weyn loogu isticmaalaa faakiyuumlaha iyo qaybaha ay sameyso ABS sidoo kale waxaa loo isticmaalaa maacuunta jikada. Waxyaalaha la isku duro ee ABS waxay ka badan yihiin 88% wadarta wax soo saarka balaastigga ee qaboojiyaha. 3. Qalabka Office Maadaama ABS uu leeyahay dhalaal sare iyo wax si fudud u qaabeynta, qalabka xafiiska iyo mashiinadu waxay u baahan yihiin muuqaal qurux badan iyo gacan qabasho wanaagsan, sida kiiska taleefanka, kiiska xusuusta, kombiyuutarka, mashiinka fakiska iyo nuqul, qaybaha ABS ayaa si weyn loo isticmaalaa. Qalabka 4.Indartiiska Maadaama ABS uu leeyahay qaabab wanaagsan, waxaa faa'iido leh in la sameeyo qalab jiif ah iyo qolof leh cabbir weyn, cillad yar iyo cabbirka xasilloon. Sida muraayada shaqada, miiska shaqada, barkadda dareeraha ah, sanduuqa qaybaha, iwm.
Alaabta iyo wasakhda naqshadeynta
1. Dhumucda darbiga ee alaabada: Dhumucda darbiga alaabooyinka waxay la xiriirtaa dhererka qulqulka qulqulka, waxtarka wax soo saarka iyo shuruudaha isticmaalka. Qiyaasta dhererka socodka ugu badan ee ABS ayaa ku dhalaalaya dhumucda darbiga alaabta waa qiyaastii 190: 1, taas oo ku kala duwan hadba heerka. Sidaa darteed, dhumucda darbiga alaabta ABS waa inaysan noqon mid aad u khafiif ah. Alaabada u baahan daaweynta korantada, dhumucda derbiga waa inay xoogaa ka sii dhumuc weyn tahay si loo kordhiyo dhejiska u dhexeeya dusha iyo dusha alaabta. Sababtaas awgeed, dhumucda darbiga ee sheyga waa in lagu xushaa inta u dhexeysa 1.5 iyo 4.5 mm. Markaad tixgelinayso dhumucda darbiga alaabada, waa inaan sidoo kale fiiro gaar ah u leenahay isku ekaanshaha dhumucda darbiga, oo aan ahayn farqi aad u weyn. Badeecadaha u baahan in la koronto geliyo, dusha sare waa inuu ahaadaa mid siman oo aan jajab lahayn, maxaa yeelay qeybahani waa u fududahay in loo hoggaansamo boodhka saamaynta korantada, taas oo keenaysa adkeynta liidashada maqaarka. Intaa waxaa dheer, jiritaanka geesaha fiiqan waa in laga fogaadaa si looga hortago isku-buuqsanaanta walaaca. Sidaa darteed, waa ku habboon tahay in loo baahan yahay kala-wareejinta qaanso-rogidda xagallada, kala-goysyada dhumucda iyo qaybaha kale.
2. Jilitaanka Demoulding: Diidmada soo saarista alaabooyinka waxay si toos ah ula xiriirtaa yaraanshihiisa. Sababo la xiriira darajooyin kala duwan, qaabab kala duwan oo badeecooyin ah iyo xaalado kala duwanaan oo kala duwan awgood, yareynta sameynta waxay leedahay kala duwanaansho qaarkood, guud ahaan 0.3 0.6%, mararka qaarkood illaa 0.4 0.8%. Sidaa darteed, saxsanaanta cabirka sameynta alaabtu waa sarreeysaa. Badeecada ABS, jiirada daadinta waxaa loo tixgeliyaa sida soo socota: qeybta aasaasiga ah waa 31 darajo dhanka jihada demould, qeybta godaduna waa 1 darajo 20'waa jihada demouldinging. Alaabooyinka leh qaab isku dhafan ama leh xarfo iyo qaabab, jajabka demoulding waa in si habboon loo kordhiyaa.
3. shuruudaha ka saarida: maxaa yeelay badeecada muuqata dhamaadka sheygu saameyn weyn ayey ku leedahay waxqabadka koronto-dhalinta, muuqaalka nabar kasta oo yar ayaa la arki doonaa ka dib marka la xardho, marka lagu daro shuruudda ah in nabarro aysan ka jirin daloolka dhimashadu, aagga wax ku oolka ee ejection waa inuu ahaado mid ballaaran, iskuduwaha isticmaalka ejectors-yada badan ee habka ejection waa inuu fiicnaadaa, xoog bixistuna waa inay ahaataa mid isku mid ah.
4. Qiiqa: Si looga hortago qiiqa xun inta lagu gudajiro hawsha buuxinta, gubi dhalaalaya iyo khadadka muuqda ee tolmada, waxaa loo baahanyahay in la furo hawo ama hawo dalool leh qoto dheer oo ka yar 0.04 mm si loo fududeeyo soo saarista gaaska dhalaasho inch 5. Orodyahanka iyo iridda: Si ABS dhalaalku u buuxiyo dhammaan qeybaha godka sida ugu dhaqsaha badan, dhexroorka orodyahanku waa inuusan ka yarayn 5 mm, dhumucda iridda waa inay ka badan tahay 30% dhumucdeeda ee badeecada, iyo dhererka qaybta toosan (oo loola jeedo qaybta geli doonta daloolka) waa inay ahaataa ilaa 1 mm. Mawqifka iridda waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo shuruudaha alaabta iyo jihada socodka maaddada. Ramp looma ogola inuu ku noolaado dusha sare ee dusha sare ee alaabooyinka u baahan in koronto lagu xiro.
Daaweynta dusha sare iyo qurxintaABS way fududahay in la rinjiyeeyo lana midabeeyo. Waxaa sidoo kale lagu buufin karaa birta iyo koronto-dhalinta. Sidaa darteed, qaybaha ABS waxaa badanaa lagu qurxiyaa laguna ilaaliyaa dahaadhida xoqida iyo ku buufinta, daabacaadda xarka, electroplating iyo ku tumashada kulul dusha sare ee qaybaha wax taaj oo kale ah. 1. ABS waxay leedahay astaamo duritaan wanaagsan, waxayna ku heli kartaa buundooyin kala duwan oo hadhuudh ah, ceeryaamo, dusha sare iyo muraayad dusheeda ah. 2. ABS waxay leedahay xiriir wanaagsan oo rinji ah, waana sahlan tahay in lagu helo meelo midabbo kala duwan leh oo lagu buufiyo dusha sare. Iyo shaashadda daabacaadda jilayaal iyo qaabab kala duwan. 3. ABS waxay leedahay astaamo dahaadh elektroonig ah oo wanaagsan waana balaastikada kaliya ee si fudud ku heli kara dusha biraha iyadoo dahaadhay koronto la'aan. Hababka dahaadhka koronto la'aanta waxaa ka mid ah dahaadhida koronto la'aan, dahaadhka nikel la'aanta, fiilo la'aanta bilaa korantada ah iyo dahaadhka koromada ee bilaa koronto
Hore: Shiinaha OEM Products ridaya dhinta Quotes - CNC machining - Mestech
Xiga: Alaabooyinka is urursanaya
Caaryada duro caag Medical iyo wax taaj oo kale
Qaybaha caaga ah ee elektiroonigga ah
Daabacaadda silkscreen iyo qurxinta qaabka ...
Gawaarida gawaarida iyo cirbadeynta cirbadeynta
Usheeda dhexe Nylon for danab sare koronto ku biiro
Balaastiigga balaastikada iyo faakiyuumka